Vari Kukanganisa ... Hausi KuTwitter Zvakwana | Martech Zone
Vari Kukanganisa… Hausi KuTwitter Zvakwana
Chitatu, June 24, 2015 China, June 25, 2015 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, ndingadai ndakapa zano vanhu kupokana ne tweeting zvakanyanya. Muchokwadi, chaive chikonzero chakakosha nei vanhu vasina kukutevera pa Twitter. Nekukurumidza kumberi makore mashoma uye Twitter yabva pamashiripiti mashoma paawa kuenda kune inonzwika kutinhira kwemaopopost, maakaunzi ekunyepera, spammers, neruzivo padanho risingakwanise kugayiwa padanho chero rakanaka.
Chokwadi ndechekuti, kana iwe uri kuyedza kutariswa munzvimbo ine ruzha, iwe unofanirwa kusimudza izwi rako kana kuramba uchizvidzokorora. Twitter imba ine ruzha… zvine mutsindo zvine mutsindo.
Ini ndinoramba ndichiverenga mitemo nezve Twitter online. Mitemo inoenderera ichitsikiswa nezve iyo nguva yakanakisa yeTwitter uye Tweeting yakawandisa. Ndakafunga kuyedza izvi mitemo. Muchokwadi, ini handina kungoita bvunzo diki, ndakaridza Twitter kumusoro.
Usandibata zvisiri izvo
Ini ndinofarira kupopota muimba ine ruzha here? Kwete. Ndinofarira kuzvidzokorora here? Kwete… ndinozvivenga zvachose. Uye ndine chokwadi chekuti vamwe vanhu vachandiudza kuti rairo yandiri kuda kupa ichawedzera kuchinetso kwete kubatsira kuigadzirisa.
Dambudziko harisi vanhu vakaita seni. Dambudziko imba. Zuva rega rega kwemakore mazhinji, ini ndakashanda nesimba muTwitter uye ndakaedza kupa kukosha, varaidzo, rubatsiro uye kutaurirana. Nekufamba kwenguva, zvakadaro, ndaneta ne Twitter. Ini ndinovhura yangu yekudyisa uye diki muzana yehurukuro iri kukosha.
Anenge mazuva ese ini ndinodzivirira spammer. Pandinotarisa peji ravo, vane meseji imwe yakadzokororwa mazana enguva. Zvakakomba, zvakaoma sei kuTwitter kuisa firita pamaakaundi kuona kuti havasi kudzokorora meseji yavo kasingaperi?!
Saka, kudzamara Twitter yasarudza kuita chimwe chinhu nezve mhando uye huwandu hweruzivo rwakagovaniswa kuburikidza neTwitter, ndafunga kutyora iyo mitemo yevandinoshamwaridzana navo. Ah… uye zvakashanda.
Tweeting Awa Yese, Maawa makumi maviri nemana pazuva
Jenn akandizivisa kune yakakura WordPress plugin inonzi Dzoserai Old Post. Nepo paine yemahara vhezheni, ini ndinokurudzira zvikuru kubhadhara kune zvimwe zvinowedzerwa zvinosanganisirwa mune inoshamisa Pro vhezheni. Iyo vhezheni ine toni yakawanda maficha uye inowedzera kugona kwePush yako yezviri mukati nemufananidzo wakaratidzwa zvakananga kubva kuWordPress. Iyo plugin zvakare inobvumidza Bit.ly kusangana kuti iwe ugone kuyera iyo yekudzvanya-kuburikidza chiyero kubva kune akagovaniswa ma link.
Heino muenzaniso wekuti iyo Twitter Kadhi inoonekwa sei
Tarisa uone Saiti Yedu Itsva… uye neyedu Nyowani Zviwanikwa http://t.co/UWExub2Dy7 #content #wordpress pic.twitter.com/MHVgN5zIY6
- Kushambadzira Tekinoroji (@martech_zone) June 24, 2015
Ini ndinoseta iyo plugin kumusoro kuti ndinyore zvisina kurongeka zvemukati mukati megore rapfuura awa rega pa Twitter. Ndichiri ini ndaitumira 2 kusvika ku4 inogadziridza pazuva, ikozvino ini ndakaburitsa ka24 kusvika makumi matatu pazuva. Neruzha rukuru irworwo, iwe ungafunga kuti ndinorasikirwa nevateveri vangu vese ndotyaira kubatikana kwangu mutangi. Kwete.
Mhedzisiro yeTweeting Zvakawandisa
Statistics hainyepe uye yangu Twitter Analytics pamwe neyangu saiti yeGoogle Analytics iri kundiudza kuti uku kwaive kushamisika kufamba! Heano mabhureki:
Engagement Rate Kubva pa0.5% kusvika pamusoro pe2.1%!
Tweet Zviratidzo UP 159.5% kusvika 322,000.
Mbiri Yekushanya UP 45.6% kusvika 2,080.
Followers UP 216 kusvika 42,600.
Dzokorora UP 105.0% kusvika 900.
Tweets Kubatanidza Kwauri UP 34.3% kusvika 6,352.
Saiti Traffic kubva kuTwitter UP 238.7% kusvika 1,952 kushanya.
Handina chokwadi chekuti ndingapokana sei nenhamba idzi. Handina kurasikirwa nevateveri, ndakawana vateveri. Handina kurasikirwa nekubatanidzwa, zvakapetwa kane. Handina kurasikirwa nekushanyirwa saiti, ivo vakapeta. Yese yega metric inonongedzera kuchokwadi chekuti, nekuwedzera zvakanyanya huwandu hwetweets dzakaburitswa, ini ndavandudza zvakanyanya mashandiro angu pa Twitter.
Sei? Zvinotaridza zvakajeka kuti, kwete chete handisi kunetsa vateveri vangu vazvino, maTweets angu ari kuwonekwa zvakanyanya, akadzoreredzwa zvakanyanya, uye akabaya zvimwe. Dai ini ndaizoita fananidzo, zvingave kuti uri kutyaira mumugwagwa mune yakazara traffic uye tweet ibhiribhodi. Iwo mikana yekuona traffic bhodhi rako rakanaka. asi kana iwe ukakwanisa kuisa bhiribhodi mamaira ese kana zvakadaro, mikana yekuonekwa iri nani zvakanyanya.
Usavimbe nemuenzaniso wangu kungo gadzira ruzha rwako pa Twitter. Rangarira kuti ndiri kungogovana maKadhi eTwitter nezvakakosha nguva zhinji. Iniwo ndaisazotya kugovana zvakafanana Tweet zvakanyanya kanopfuura kamwe pazuva. Mikana ndeyekuti vateveri vako havazozvione kanopfuura kamwe chete. Edza kupamhidzira yako Twitter kuburitsa mwero uye ona kuti zvinokanganisa sei yako analytics. Kana ikashanda, edza kuipamhidzira zvakare. Ndizivisei kuti zvinofamba sei mumashoko.
kuburitsa: My Dzoserai Old Post chinongedzo chinobatanidza chinongedzo. Ndakaifarira zvekuti ndakabva ndasaina kubatana navo.
Tags: autopostkumutsidzira yekare posvokumutsidzira yekare post prokuronga wordpress pasocialsocial wordpress kusanganaTwitterWordpress yemagariro
Corporate Yemagariro Midhiya Kubudirira Inoda SMM Chishandiso
Iwe Unofanirwa Kuve Rini Kugadzirisazve Yako Logo?
Jul 5, 2015 na11: 45 PM
Twitter neFacebook zvachinja matauriro anoita vanhu munguva dzazvino….